Costa Rica: Fanadihadiana ny fifandraisan’ny Fiangonana sy ny fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2010 22:45 GMT
Saripikan'ny Radio Rover ary ambanin'ny fanomezan-dalana CC.
Milamindamin-dratsy ao anatin'ny rivon-drivodoza ny EKAR tao anatin'ny tapa-bolana noho ny fiampangana fametavetana zaza tsy ampy taona ataon'ny pretra avy ao amin'ny fiangonany manerana ny tany. Misongadina mihitsy ity raharaha ity any Costa Rica noho ny maha-firenena miankina amin'ny fivavahana azy, satria fivavaham-panjakana ny Katolisisma ao ary miteraka fifandraisana akaiky eo amin'ny Fiangonana [Eglizy] izany. Mahatsiaro ho tafiditra lalina amin'ity lohahevitra ity ny mpamaham-bolongana KostaRikana, ary dia feno azy ny aterineto raha tsy atoro intsony fa maro an'isa any amin'ity firenena ity ny Katolika Romana.
Lauren Latifa, ao amin'ny bolongany Club Sodoma [es] no manoratra:
Talanjona aho amin'ny fampiheverana ho tsy dia misy dikany loatra sy tsy mila resahina ny fisongan'ny fametavetana zaza tsy ampy taona ao anatin'ny fiangonana Katolika. Saingy hanaiky ve ny mpitarika ny Katolika fa be ny fahadisoana ao anatin'ny fiangonana? Miharihary fa tsy hanaiky izany velively ireo. Maro ny raharaha iezahan'izy ireo nampanginana tamin'ny alalan'ny fanonerana ireo izay niharany, ary afindrafindran'izy ireo fiangonana hatrany ireo mpitondra fivavahana manao ny tsy mety nefa manohy ny fanararaotana ataony, izany no natao mba hosorohana ny fandemena ny herin'ny “fiangonana.”
Nanoratra ny mpamaham-bolongan'ny “Cultura, Cultura Política y Económica [es]” mijery ny fielezan'ny fahadisoam-panantenana:
Ny fanararaotana ara-pananahana ny zaza no fahotana maharikoriko indrindra vitan'olondehibe. Ary raha relijiozy, izay nantenaina hanana fahatsoram-po indrindra no mahavita izany heloka izany; dia hiteraka horaka sy fahakiviana kokoa eo imason'ny fiaraha-monina.
Iray amin'ny fahadisoam-panantenana mitranga moa ny tsy fanasaziana ny mpitondra fivavahana, araka izay lazain'ny mpamaham-bolongana H3Dicho :
Tokony esorina amin'ny toerany avy hatrany ny mpitondra fivavahana ampangaina amin'ny fanolanana zaza tsy ampy taona rehefa hadihadiana izy, ary tokony ho vonona hiatrika ny manam-pahefana. Ny olana manko dia aleon'ny fiangonana manao ilay “fanadihadiana anatiny” ihany mba tsy hanalana baraka ny anaran'ny “fiangonana” , tsy aseho ny besinimaro izany, mba tsy hanasaziana ny heloka ara-pananahana vitan'izy ireny.
Cristian Cambronero, mpanoratra ny bolongana Fusil de Chispas [es] no milaza fa ahitana ny karazany rehetra ny heloka toy izao ao Costa Rica:
Eto Costa Rica tsy vitan'ny hoe misy ny mahavita fihoaram-pefy tahaka izao,fa misy pretra iray voaheloka ho any am-ponja dia hitanay fa misy eveka manafina pretra iray nandositra fa nampagaina ho nanao an-keriny. Ahoana moa ny amin'ilay Eveka? Izy no izy, ao amin'ny Fivondronamben'ny eveka,tia manondrotondro raha mbola azony atao koa izany, mifangaroharo amin'ny mpisoloky, ary manome toromarika ny depiote kanosa aminn'y fomba fitondrana mifanaraka amin'ny “maoraly sy ny fomba tsara“.
Na dia mihamalaza ratsy aza ny Fiangonana Katolika manerana ny firenena, dia mbola nanatona ny antanantohatr'ity fiangonana ity ihany ny filoha voafidy handray ny fahefana amin'ny 8 May, mba hanamafy orina kokoa ny fifamatorana misy ao amin'ny Fanjakana sy ny Fiangonana. Niteraka tsy fahafaliana tamin'ny olona maro izany. Nitaraina momba izany i Cambronero raha niteny hoe :
Maro no niteny fa nihoampampana ny filazanay tamin'ny voalohan'ny volana hoe nanambady ny eveka i Laura Chinchilla rehefa avy nivory ka nisongadina ny fananganana “komity” mandrindra “ny fifandraisana maharitra misy eo amin'ny fitondrana sy ny Fiangonana Katolika”, araka izay navoitran'ny La Nación [es] (…) Androany dia mbola niteny tamintsika io gazety io fa notohanan'ny eveka ara-bola i Chinchilla nandritra ny fampielazan-kevitra, Izao indray dia manangana ny Corcordato ry zareo: fifanarahana roa tonta eo amin'i Vatican sy ny Fanjakana, izay manome tombondahiny maro ho an'ny Fiangonana Katolika izay tsy zakain'ny fiangonana hafa.
Nanambara ny mpanoratra ny bolongana ASOJOD [es] fa kivy tanteraka amin'ny toe-draharaha :
Efa naloanay ato amin'ny ASOJOD hatramin'ny fiandohany mihitsy ny tsikombakomba misy eo amin'ny Fiangonana sy ny Fanjakana, satria miantraika any amin'ny fahafahan'ny tsirairay izany ary raha ny eto Costa Rica dia manome vahana vondrona iray andanian'ny KostaRikana vola. Ankehitriny ny Fiangonana Katolika no mampiasa ny volantsika, fa noho ny asa andavanandron'ny Fiangonana, dia midangana tokoa ny fandaniana ataony tafiditra ao anatin'ny tetibolan'ny Repoblika. Ankoatra izay dia mbola ny fiangonana ihany koa no manondro sasantsasany amin'ny politikam-panjakana, indrindra moa fa ireo izay mifandraika amin'ny fitaizana ara-pananahana sy ny fahasalamana ara-pananahana, ka, noho ny fahefana ananany ara-politika sy ara-pivavahana dia hosihoseny tanteraka ny fahafahan'ny tsirairay amin'izay fanirian'ny tsirairay hitondrany ny fiainany.